Accueil > Gazetin'ny nosy > Firaisan-kina amin’ny ratsy : Raikitra koa ny an’ny veterinera
Firaisan-kina amin’ny ratsy : Raikitra koa ny an’ny veterinera
Herinandro vitsy lasa izay no nanao “corporatisme” be fahatany ireo mpitsabo sy mpiasa eo anivon’ny hopitaly HJRA rehefa nampanantsoan’ny pôlisy ny profesora Auberlin Rakototiana sy ny talen’ny DAT. Tsiahivina ihany fa tsy niandry ny vokatry ny fanadihadiana akory ireo mpitsabo sy mpiasan’ny HJRA sasan-tsasany fa avy hatrany dia nanao fitokonana nitaky ny famotsorana ny naman’izy ireo tsy misy atakandro. Ankehitriny dia ny sendikàn’ny veterinera eto Madagasikara indray no mihetsika rehefa nosamborina ny naman’izy ireo miisa efatra.
Araka ny fanazavana nomen’ny Dr France Ranaivosolofo, filohan’ny sendikàn’ny veterinera eto amintsika, dia manome 72 ora ny fanjakana izy ireo hamotsorana haingana ireo veterinera efatra izay voapanga ho niray tsikombakomba tamin’ny daholo tamina resaka taratasin’omby halatra. Ho an’ny sendikà dia madio tanteraka, izany hoe tsy nanao na inona na inona mihintsy ireo veterinera efatra voasambotra ireo fa fanatanterahana ny asany no nataon’izy ireo, dia ny fanaovana vaksiny ny omby ary ny fanomezana ny taratasy fanamarinana izany. Tsy mahafantra ny omby manana taratasy ara-dalàna sy ny omby halatra ny veterinera satria tsy tafiditra ao anatin’ny asany izany, hoy hatrany ny Dr France Ranaivosolofo.
Mbola anisany olana lehibe amin’ny fampiharana ny fanjakana tan-dalàna eto amintsika moa io “corporatisme” be fahatany io. Maninona moa raha miandry ny vokatry ny fanadihadiana ataon’ny mpitandro filaminana na ny fitsarana ny sendikàn’ny veterinera fa avy hatrany dia manome fe-potoana 72 ora ny fanjakana ? Raha izao no mitohy, isaky ny misy ny mpiasam-panjakana voasambotra noho ny raharaha maloto iray dia tsy maintsy hitsangana ny namany, hitaky ny famotsorana azy.Tsy hisi mihintsy ny fanjakana tan-dalàna raha izany foana no hitranga eto amin’ity firenena ity.